China Kuyera thermometer - Vanotengesa uye Vagadziri - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Kuyera thermometer
Iyo pahuma tembiricha yekupisa pfuti (infrared thermometer) yakagadzirirwa kuyera iwoya wemuviri wepamberi tembiricha yekushisa. Zviri nyore kwazvo uye nyore kushandisa. Iyo pahuma tembiricha yekupisa inokwanisa kuyera zvakaringana tembiricha mune yechipiri, pasina laser nzvimbo, dzivisa kukuvara kwemaziso, kushaiwa kubata ganda remunhu, kudzivirira kutapukirwa nehutachiona, imwe-pisa tembiricha yekuyera, uye tarisa furuwenza. Iyo yakakodzera kune vashandisi vemhuri, mahotera, mabhuku emaraibhurari, mabhizinesi makuru uye masisitimu, uye inogona zvakare kushandiswa muzvipatara, zvikoro, tsika, nhandare dzendege uye dzimwe nzvimbo dzakazara. Pfuti yekudziya inogona zvakare kupiwa kune vashandi vekurapa kuti vashandise mumakiriniki.
Izvi zvinotevera ndezve Thermometer ine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Thermometer.
Wholesale Kuyera thermometer yakagadzirwa neChina kubva kufekitari yedu. Fekitari yedu inonzi Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd inova imwe yevagadziri uye vatengesi vanobva kuChina. Kugamuchirwa kutenga Kuyera thermometer nemutengo wakaringana uyo une CE, FDA. Iwe unoda here mutengo wemutengo uye makotesheni? Kana iwe uchida, isu tinokwanisawo kukupa.